Spotify's subscription podcast platform ichabhadhara 5% commission kubva mugore rechipiri | IPhone nhau
Sekuzivisa kwakaita Wall Street Journal, kambani yeSweden yakazivisa zviri pamutemo chikuva chayo chekunyorera kuPodcast, chikuva chakasiyana zvakanyanya nekushanda kwekunyoreswa kwepodcast kwakaunzwa neApple svondo rapfuura, zvishoma zvichisimbisa ruzivo rwakafambiswa nepakati iyi.
La Spotify podcast kunyorera chikuva haizochengete chero chikamu chemari yakabhadharwa nevashandisi mukati memakore maviri ekutanga. Iyo chete mari iyo vagadziri vezvinhu vanozoona yakadzikiswa ichave iyo komisheni iyo yekubhadharisa chikuva pane yega yekutengeserana (Stripe).
Kubva mugore rechitatu, Spotify ichachengeta 5% Commission pane ese mabhadharo. Vese vagadziri vezvinhu vanoda kuita moneti yavo yezvinhu kuburikidza neSpotify vanofanirwa kushandisa chikuva chipingo, chikuva chakatengwa naApple makore mashoma apfuura kweanopfuura mamirioni zana emadhora.
Mutengo uyo vaparidzi vanogona kubhadharisa ndiwo $ 2,99, $ 4,99, kana $ 7,99 pamwedzi. Kunyangwe vaparidzi vachishandisa Anchor chikuva kurodha nekumaka podcast se "vanyoreri chete", podcasts ichave ichiwanikwa paSpotify yakamisikidzwa neyakavharwa.
Kuti vateerere iyo, vashandisi vanofanirwa kushanyira webhusaiti yechirongwa chiri mubvunzo uye kunyorera, ndiyo chete nzira inowanikwa kuti vakwanise svetuka 30% Commission inobhadharwa neApple neGoogle. Pakutanga zvinoita kunge zvakanetsa, asi zvinofungidzirwa kuti zvese zvirimo zvichabatanidzwa mune yakasununguka uye yakapusa nzira yevashandisi.
Neichi chiziviso, Spotify inovimbisa kukwezva nhamba hombe yevanogadzira zvemukatiSezvo, mushure memakore maviri ekutanga, iyo Spotify sevhisi Commission iri 5%. Iine Apple Podcast, mukati megore rekutanga, kambani yaTim Cook inochengeta 30%, nepo kubva mugore rechipiri zvichienda ichidonha kusvika pa15%.
Pakutanga iyo Spotify podcast chikuva ichasunungurwa chete muUnited States kuwedzera zvishoma nezvishoma kune dzimwe nyika.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Kupikisana » Spotify's subscription-based podcast platform ichabhadhara 5% commission kubva mugore rechipiri
Dambudziko idzva reApple Watch, mangwana munhu wese kutamba